နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် သြစတြေးလျဓနသဟာယ နိုင်ငံတွင် အာဆီယံ-သြစတြေးလျ အထူးထိပ်သီးအစည်းအဝေးနှင့် တရားဝင်ချစ်ကြည်ရေးခရီးစဉ် သွားရောက်ခဲ့ပြီး ပြန်လည်ရောက်ရှိခြင်း | NLD
Home State Counsellor နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် သြစတြေးလျဓနသဟာယ နိုင်ငံတွင် အာဆီယံ-သြစတြေးလျ အထူးထိပ်သီးအစည်းအဝေးနှင့် တရားဝင်ချစ်ကြည်ရေးခရီးစဉ် သွားရောက်ခဲ့ပြီး ပြန်လည်ရောက်ရှိခြင်း
နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် သြစတြေးလျဓနသဟာယ နိုင်ငံတွင် အာဆီယံ-သြစတြေးလျ အထူးထိပ်သီးအစည်းအဝေးနှင့် တရားဝင်ချစ်ကြည်ရေးခရီးစဉ် သွားရောက်ခဲ့ပြီး ပြန်လည်ရောက်ရှိခြင်း
Posted By: mygate wayon: မတျ 21, 2018 In: State Counsellor, State Counsellor News, State Counsellor SoundNo Comments
နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဦးဆောင်သော မြန်မာကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့သည် သြစတြေးလျနိုင်ငံ၊ ဆစ်ဒနီမြို့တွင် မတ်လ (၁၇) ရက်နေ့မှ (၁၈) ရက်နေ့အထိ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သည့် အာဆီယံ-သြစတြေးလျ အထူးထိပ်သီးအစည်းအဝေး တက်ရောက်ခဲ့ပြီး သြစတြေးလျနိုင်ငံ၊ ဝန်ကြီးချုပ် မစ္စတာမယ်လ်ကွန် တန်ဘယ်လ်၏ ဖိတ်ကြားချက်အရ သြစတြေးလျ ဓနသဟာယနိုင်ငံသို့ မတ်လ (၁၉) ရက်နေ့မှ (၂၀) ရက်နေ့အထိ တရားဝင်ချစ်ကြည်ရေးခရီးစဉ် ဆက်လက်သွားရောက်ခဲ့သည်။
နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်သည် ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ မတ်လ (၁၇) ရက်နေ့မှ (၁၈) ရက်နေ့ နေ့လယ်ပိုင်းအထိ ဆစ်ဒနီမြို့၌ကျင်းပခဲ့သည့် အာဆီယံ-သြစတြေးလျထိပ်သီးအစည်း အဝေးဆိုင်ရာ ဆက်စပ်အစီအစဉ်များ၊ အာဆီယံ-သြစတြေးလျအထူးထိပ်သီးအစည်းအဝေး၏ မျက်နှာစုံညီ အစည်းအဝေး နှင့် အာဆီယံ- သြစတြေးလျ သီးသန့်အထူးထိပ်သီး အစည်းအဝေးများသို့ အခြားအာဆီယံနိုင်ငံများမှ ခေါင်းဆောင်များ နှင့် အတူ ပါဝင်တက်ရောက်ခဲ့သည်။
အစည်းအဝေးတွင် နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်မှ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဒီမိုကရေစီအသွင် ကူးပြောင်းရေး၊ ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေး လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့် ရခိုင်ပြည်နယ် ကိစ္စအပါအဝင် စိန်ခေါ်မှုများ၏ သိမ်မွေ့နက်နဲမှုများကို ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပြီး အဆိုပါစိန်ခေါ်မှုများ ဖြေရှင်းနိုင်ရေးအတွက် မြန်မာအစိုးရ၏ ဦးဆောင်ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ အောင်မြင်ရေးနှင့် စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ရေးကိစ္စများတွင် အပြုသဘော ပါဝင်ကူညီပံ့ပိုးကြရန် ဆွေးနွေး ပြောကြားခဲ့သည်။
နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်သည် အာဆီယံပေါင်းစည်းမှုလုပ်ငန်းစဉ် အဆင်ပြေချောမွေ့စေရေး အတွက် အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများအကြား ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကွာဟချက်ကို လျှော့ချနိုင်ရန် သာမက စိန်ခေါ်မှုများကို ရှုမြင်သည့်သဘောထားအမြင်ချင်း ကွာဟမှုများ ကျဉ်းမြောင်းစေရန်လည်း လိုအပ်ကြောင်း၊ ငြိမ်းချမ်းရေးကို ဖော်ဆောင်နေကြသူများအနေဖြင့် မိမိတို့ကိုယ်တိုင်လည်း ဦးစွာငြိမ်းချမ်းမှုရှိရန်နှင့် ဒေါသအမုန်းတရားနှင့် အကြောက်တရားစသည့် စိတ်ခံစားချက်များကို ထိန်းချုပ်ရန် လိုအပ်ကြောင်း၊ အကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရာတွင် အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများအနေဖြင့် မတူညီသည့် အသိုက်အဝန်းများအကြား ကွဲပြားမှုကိုဖြစ်စေမည့် အပြုသဘော မဆောင်သည့် စိတ်ခံစားချက်များကို ထိန်းချုပ်ကိုင်တွယ်ဆောင်ရွက်ကြရန် လိုအပ်ပြီး အာဆီယံအဖွဲ့ကြီး၏ စည်းလုံးညီညွတ်မှု၊ တူညီဆန္ဒဖြင့် ဆောင်ရွက်မှု၊ အဖွဲ့ဝင်များအကြား အပြန်အလှန်လေးစားမှုတို့ကိုလည်း ထိန်းသိမ်းမြှင့်တင်သွားရန် အရေးကြီးကြောင်း အလေးပေးပြောကြားခဲ့သည်။
အာဆီယံ-သြစတြေးလျအထူးထိပ်သီးအစည်းအဝေးတွင် အာဆီယံအဖွဲ့ကြီးနှင့် သြစတြေးလျ နိုင်ငံတို့အကြား အကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု နားလည်မှု စာချွန်လွှာ (MOU on Cooperation in Counter-Terrorism) ကို လက်မှတ်ရေးထိုးနိုင်ခဲ့ပြီး အာဆီယံအဖွဲ့ကြီးနှင့် သြစတြေးလျနိုင်ငံတို့အကြား ဒေသတွင်းလုံခြုံရေး၊ အနာဂါတ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့် နှစ်ဖက်ပြည်သူများအကြား ပိုမိုထိတွေ့ဆက်ဆံရေး မဏ္ဍိုင်ကြီး (၃) ရပ်အောက်တွင် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု တိုးမြှင့်ရေးဆိုင်ရာ ဆစ်ဒနီကြေညာချက် (Sydney Declaration) ကို ထုတ်ပြန်နိုင်ခဲ့သည်။
ထို့နောက် နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဦးဆောင်သော မြန်မာကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့သည် သြစတြေးလျ ဝန်ကြီးချုပ် The Hon. Malcolm Turnbull ၏ ဖိတ်ကြားချက်အရ သြစတြေးလျနိုင်ငံတွင် တရားဝင်ချစ်ကြည်ရေးခရီးစဉ် သွားရောက်ရန်အတွက် ၁၈-၃-၂၀၁၈ ရက်နေ့ ညနေပိုင်းတွင် ကင်ဘာရာမြို့သို့ လေကြောင်းခရီးဖြင့် ဆက်လက်ထွက်ခွာခဲ့သည်။
နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်သည် ၁၉-၃-၂၀၁၈ ရက် နံနက်ပိုင်းတွင် သြစတြေးလျ ဝန်ကြီးချုပ် The Hon. Malcolm Turnbull မှ ဂုဏ်ပြုကြိုဆိုပွဲ အခမ်းအနားသို့ တက်ရောက်ခဲ့ပြီး သြစတြေးလျဝန်ကြီးချုပ်နှင့် နှစ်နိုင်ငံဆွေးနွေးပွဲကို ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ဆွေးနွေးပွဲတွင် နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေး၊ ကုန်သွယ်ရေးနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကဏ္ဍတွင် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတိုးမြှင့်ရေး ကိစ္စရပ်များ၊ ပညာရေးကဏ္ဍအပါအဝင် လူ့စွမ်းအား ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့် ရခိုင်ပြည်နယ်အရေးကိစ္စတွင် သြစတြေးလျနိုင်ငံမှ ပါဝင်ကူညီဆောင်ရွက်ပေးနိုင်မည့် အလားအလာများကို ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။ နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်သည် သြစတြေးလျအတိုက်အခံ လေဘာပါတီခေါင်းဆောင် Mr. Bill Shorten ကိုလည်း လက်ခံတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့သည်။ ယင်းနောက် နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်သည် National Arboretum တွင် သြစတြေးလျနိုင်ငံ ချစ်ကြည်ရေးခရီးစဉ် အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် သစ်ပင်စိုက်ပျိုးပေးခဲ့ပြီး နေ့လယ်ပိုင်းတွင် နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်သည် သြစတြေးလျနိုင်ငံရှိ မြန်မာ အသိုက်အဝန်းနှင့် Albert Hall တွင် ခင်မင်ရင်းနှီးစွာတွေ့ဆုံခဲ့သည်။
ခရီးစဉ်အတွင်း နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်သည် သြစတြေးလျနိုင်ငံ တရားဝင် ချစ်ကြည်ရေးခရီးစဉ်၏ အဓိကအစီအစဉ်များကို အောင်မြင်စွာပြုလုပ်နိုင်ခဲ့သည်။ သို့သော် ခရီးဝေး လေယာဉ်ခရီးစဉ်၊ သင်္ဘောခရီးစဉ်များကြောင့် မူးဝေမှုခံစားခဲ့ရသည့်အပြင် မြန်မာနိုင်ငံသို့ အပြန်ခရီးစဉ်အတွက် အနားယူရန် လိုအပ်သဖြင့် တွေ့ဆုံမှုအစီအစဉ်အချို့ကို ဖျက်သိမ်းခဲ့ရသည်။
နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်သည် မတ်လ ၂၀ ရက်နေ့ ညနေပိုင်းတွင် လေကြောင်းခရီးဖြင့် နေပြည်တော်သို့ ပြန်လည်ရောက်ရှိခဲ့သည်။
နိုငျငံတျော၏အတိုငျပငျခံပုဂ်ဂိုလျ ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျ သွစတွေးလဓြနသဟာယ နိုငျငံတှငျ အာဆီယံ-သွစတွေးလအြထူးထိပျသီးအစညျးအဝေးနှငျ့ တရားဝငျ ခဈြကွညျရေး ခရီးစဉျသှားရောကျခဲ့ပွီး ပွနျလညျရောကျရှိခွငျး
နိုငျငံတျော၏အတိုငျပငျခံပုဂ်ဂိုလျ ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျ ဦးဆောငျသော မွနျမာ ကိုယျစား လှယျအဖှဲ့သညျ သွစတွေးလနြိုငျငံ၊ ဆဈဒနီမွို့တှငျ မတျလ (၁၇) ရကျနမှေ့ (၁၈) ရကျနအေ့ထိ ကငျြးပပွုလုပျခဲ့သညျ့ အာဆီယံ-သွစတွေးလြ အထူးထိပျသီးအစညျးအဝေး တကျရောကျခဲ့ပွီး သွစတွေးလနြိုငျငံ၊ ဝနျကွီးခြုပျ မစ်စတာမယျလျကှနျ တနျဘယျလျ၏ ဖိတျကွားခကျြအရ သွစတွေးလြ ဓနသဟာယနိုငျငံသို့ မတျလ (၁၉) ရကျနမှေ့ (၂၀) ရကျနအေ့ထိ တရားဝငျခဈြကွညျရေးခရီးစဉျ ဆကျလကျသှားရောကျခဲ့သညျ။
နိုငျငံတျော၏အတိုငျပငျခံပုဂ်ဂိုလျသညျ ၂၀၁၈ ခုနှဈ၊ မတျလ (၁၇) ရကျနမှေ့ (၁၈) ရကျနေ့ နလေ့ယျပိုငျးအထိ ဆဈဒနီမွို့၌ကငျြးပခဲ့သညျ့ အာဆီယံ-သွစတွေးလထြိပျသီးအစညျး အဝေးဆိုငျရာ ဆကျစပျအစီအစဉျမြား၊ အာဆီယံ-သွစတွေးလအြထူးထိပျသီးအစညျးအဝေး၏ မကျြနှာစုံညီ အစညျး အဝေး နှငျ့ အာဆီယံ- သွစတွေးလြ သီးသနျ့အထူးထိပျသီး အစညျး အဝေးမြားသို့ အခွားအာဆီယံနိုငျငံ မြားမှ ခေါငျးဆောငျမြားနှငျ့အတူ ပါဝငျတကျရောကျ ခဲ့သညျ။
အစညျးအဝေးတှငျ နိုငျငံတျော၏အတိုငျပငျခံပုဂ်ဂိုလျမှ မွနျမာနိုငျငံ၏ ဒီမိုကရစေီအသှငျ ကူးပွောငျးရေး၊ ငွိမျးခမျြးရေးနှငျ့အမြိုးသားပွနျလညျသငျ့မွတျရေး လုပျငနျးစဉျမြားနှငျ့ ရခိုငျပွညျနယျ ကိစ်စအပါအဝငျ စိနျချေါမှုမြား၏ သိမျမှနေ့ကျနဲမှုမြားကို ရှငျးလငျးပွောကွားခဲ့ပွီး အဆိုပါစိနျချေါမှုမြား ဖွရှေငျးနိုငျရေးအတှကျ မွနျမာအစိုးရ၏ ဦးဆောငျကွိုးပမျးအားထုတျမှု လုပျငနျးစဉျမြား အောငျမွငျ ရေးနှငျ့ စှမျးဆောငျရညျမွှငျ့တငျရေးကိစ်စမြားတှငျ အပွုသဘော ပါဝငျကူညီပံ့ပိုးကွရနျ ဆှေးနှေး ပွောကွားခဲ့သညျ။
နိုငျငံတျော၏ အတိုငျပငျခံပုဂ်ဂိုလျသညျ အာဆီယံပေါငျးစညျးမှုလုပျငနျးစဉျ အဆငျပွခြေောမှေ့ စရေေးအတှကျ အာဆီယံအဖှဲ့ဝငျနိုငျငံမြားအကွား ဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျမှုကှာဟ ခကျြကို လြှော့ခနြိုငျရနျ သာမက စိနျချေါမှုမြားကို ရှုမွငျသညျ့သဘောထားအမွငျခငျြး ကှာဟမှုမြား ကဉျြးမွောငျးစရေနျလညျး လိုအပျကွောငျး၊ ငွိမျးခမျြးရေးကို ဖျောဆောငျနကွေသူ မြားအနဖွေငျ့ မိမိတို့ကိုယျတိုငျလညျး ဦးစှာ ငွိမျးခမျြးမှုရှိရနျနှငျ့ ဒေါသအမုနျးတရားနှငျ့ အကွောကျတရားစသညျ့ စိတျခံစားခကျြမြားကို ထိနျးခြုပျ ရနျ လိုအပျကွောငျး၊ အကွမျးဖကျမှုတိုကျဖကျြရာတှငျ အာဆီယံအဖှဲ့ဝငျနိုငျငံမြားအနဖွေငျ့ မတူညီသညျ့ အသိုကျအဝနျးမြား အကွား ကှဲပွားမှုကိုဖွဈစမေညျ့ အပွုသဘောမဆောငျသညျ့ စိတျခံစားခကျြမြားကို ထိနျးခြုပျ ကိုငျတှယျဆောငျရှကျကွရနျလိုအပျပွီး အာဆီယံအဖှဲ့ကွီး၏ စညျးလုံးညီညှတျမှု၊ တူညီဆန်ဒ ဖွငျ့ ဆောငျရှကျမှု၊ အဖှဲ့ဝငျမြားအကွား အပွနျအလှနျလေးစားမှုတို့ကိုလညျး ထိနျးသိမျးမွှငျ့တငျသှား ရနျ အရေးကွီးကွောငျး အလေးပေးပွောကွားခဲ့သညျ။
အာဆီယံ-သွစတွေးလအြထူးထိပျသီးအစညျးအဝေးတှငျ အာဆီယံအဖှဲ့ကွီးနှငျ့ သွစတွေးလြ နိုငျငံတို့အကွား အကွမျးဖကျမှုတိုကျဖကျြရေး ပူးပေါငျးဆောငျရှကျမှု နားလညျမှု စာခြှနျလှာ (MOU on Cooperation in Counter-Terrorism) ကို လကျမှတျရေးထိုးနိုငျခဲ့ပွီး အာဆီယံအဖှဲ့ကွီးနှငျ့ သွစတွေးလနြိုငျငံတို့အကွား ဒသေတှငျးလုံခွုံရေး၊ အနာဂါတျ ဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျရေးနှငျ့ နှဈဖကျပွညျသူ မြားအကွား ပိုမိုထိတှဆေ့ကျဆံရေး မဏ်ဍိုငျကွီး (၃) ရပျအောကျတှငျ ပူးပေါငျးဆောငျရှကျမှု တိုးမွှငျ့ ရေးဆိုငျရာ ဆဈဒနီကွညောခကျြ (Sydney Declaration) ကို ထုတျပွနျနိုငျခဲ့သညျ။
ထို့နောကျ နိုငျငံတျော၏ အတိုငျပငျခံပုဂ်ဂိုလျ ဦးဆောငျသော မွနျမာကိုယျစားလှယျ အဖှဲ့သညျ သွစတွေးလဝြနျကွီးခြုပျ The Hon. Malcolm Turnbull ၏ ဖိတျကွားခကျြအရ သွစတွေးလြ နိုငျငံတှငျ တရားဝငျခဈြကွညျရေးခရီးစဉျသှားရောကျရနျအတှကျ ၁၈-၃-၂၀၁၈ ရကျနေ့ ညနပေိုငျးတှငျ ကငျဘာရာမွို့သို့ လကွေောငျးခရီးဖွငျ့ ဆကျလကျထှကျခှာခဲ့သညျ။
နိုငျငံတျော၏ အတိုငျပငျခံပုဂ်ဂိုလျသညျ ၁၉-၃-၂၀၁၈ ရကျ နံနကျပိုငျးတှငျ သွစတွေးလြ ဝနျကွီးခြုပျ The Hon. Malcolm Turnbull မှ ဂုဏျပွုကွိုဆိုပှဲ အခမျးအနားသို့ တကျရောကျခဲ့ပွီး သွစတွေးလဝြနျကွီးခြုပျနှငျ့ နှဈနိုငျငံဆှေးနှေးပှဲကို ကငျြးပပွုလုပျခဲ့သညျ။ ဆှေးနှေးပှဲတှငျ နှဈနိုငျငံ ဆကျဆံရေး၊ ကုနျသှယျရေးနှငျ့ ရငျးနှီးမွှုပျနှံမှုကဏ်ဍတှငျ ပူးပေါငျးဆောငျရှကျမှုတိုးမွှငျ့ရေး ကိစ်စရပျ မြား၊ ပညာရေးကဏ်ဍအပါအဝငျ လူ့စှမျးအားဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျရေးနှငျ့ ရခိုငျပွညျနယျအရေးကိစ်စတှငျ သွစတွေးလနြိုငျငံမှ ပါဝငျကူညီဆောငျရှကျပေးနိုငျမညျ့အလားအလာမြားကို ဆှေးနှေးခဲ့ကွသညျ။ နိုငျငံတျော၏ အတိုငျပငျခံပုဂ်ဂိုလျသညျ သွစတွေးလအြတိုကျအခံ လဘောပါတီခေါငျးဆောငျ Mr. Bill Shorten ကိုလညျး လကျခံတှဆေုံ့ဆှေးနှေးခဲ့သညျ။ ယငျးနောကျ နိုငျငံတျော၏ အတိုငျပငျခံပုဂ်ဂိုလျ သညျ National Arboretum တှငျ သွစတွေးလနြိုငျငံ ခဈြကွညျရေးခရီးစဉျ အထိမျးအမှတျအဖွဈ သဈပငျစိုကျပြိုးပေးခဲ့ပွီး နလေ့ယျပိုငျးတှငျ နိုငျငံတျော၏ အတိုငျပငျခံပုဂ်ဂိုလျသညျ သွစတွေးလနြိုငျငံရှိ မွနျမာ အသိုကျအဝနျးနှငျ့ Albert Hall တှငျ ခငျမငျရငျးနှီးစှာတှဆေုံ့ခဲ့သညျ။
ခရီးစဉျအတှငျး နိုငျငံတျော၏ အတိုငျပငျခံပုဂ်ဂိုလျသညျ သွစတွေးလနြိုငျငံ တရားဝငျ ခဈြကွညျရေးခရီးစဉျ၏ အဓိကအစီအစဉျမြားကို အောငျမွငျစှာပွုလုပျနိုငျခဲ့သညျ။ သို့သျော ခရီးဝေး လယောဉျခရီးစဉျ၊ သင်ျဘောခရီးစဉျမြားကွောငျ့ မူးဝမှေုခံစားခဲ့ရသညျ့အပွငျ မွနျမာနိုငျငံသို့ အပွနျခရီး စဉျအတှကျ အနားယူရနျလိုအပျသဖွငျ့ တှဆေုံ့မှုအစီအစဉျအခြို့ကို ဖကျြသိမျးခဲ့ရသညျ။
နိုငျငံတျော၏ အတိုငျပငျခံပုဂ်ဂိုလျသညျ မတျလ ၂၀ ရကျနေ့ ညနပေိုငျးတှငျ လကွေောငျးခရီးဖွငျ့ နပွေညျတျောသို့ ပွနျလညျရောကျရှိခဲ့သညျ။
ဗဟိုပြန်​ကြား​ရေး​ကော်​မတီအစည်းအ​ဝေးမှ ခရိုင်​၊ မြို့နယ်​ပြန်​ကြား​ရေး​ကော်​မတီ ဆက်​လက်​ဖွဲ့စည်းရန်​ ဆုံးဖြတ်